Semalt: Izixhobo ze-SEO ezinamandla kakhulu kwiShishini
Ukhuphiswano kwimarike ye-e-commerce luyanda, kwaye iinkampani ezinamandla kufuneka, amaxesha ngamaxesha, zibeke esweni ukuthandwa kwazo kwi-Intanethi.
Ke, kukho ukhetho oluninzi lweengcali eziqhuba iiwebhusayithi zeenkampani ezinkulu, kunye neebhloko ze-novice eziqala ukutsala abafundi abatsha.
Nokuba sele uchwephesha okanye ungumqali, abakhuphiswano bakho abayi kulinda. Ke, yiba ngowokuqala ukuphucula isikhundla sakho kwi-Intanethi: I-SEO ibalulekile kuwe!
Ewe, i-SEO yinkqubo entsonkothileyo efuna ukusetyenziswa kwezixhobo ezongezelelweyo. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, uSemalt ubeke izixhobo zohlalutyo ezilungileyo zokuphuhlisa izicwangciso ezifanelekileyo ze-SEO kwiinkampani zakho. Ikamva lisondele. Ke, qiniseka ukuba iwebhusayithi yakho inendawo ekhokelayo kuyo namhlanje.
Fumanisa apha ezona zixhobo ziphambili zohlalutyo lweSemalt kunye nezicwangciso eziya kukunceda ukhuthaze iwebhusayithi yakho kwiinjini zokukhangela eziphambili: I-SERP-UMTHAMO - I-GOOGLE WEBMASTERS-IPHEPHA ELIYENZIWE
I-SERP (iphepha leNjini yokuKhangela)
Icandelo leSERP libandakanya izixhobo zokuqonda uhlalutyo lwewebhusayithi. Fumanisa amagama aphambili akwindawo yakho yewebhusayithi, ufumane amaphepha akho eqhuba, kwaye ubone iindawo zabo kwiziphumo zophando. Jonga iimeta zokhuphiswano lwakho ukwakha iqhinga lokuphucula umgangatho.
Amagama aphambili kwi-TOP
Le ngxelo ibonakalisa onke amagama aphambili akwiiwebhusayithi zakho kwiziphumo zophando lweGoogle, amaphepha abelwe, kunye nezikhundla zazo zeSERP kwigama elingundoqo.
Bandakanya imimandla engezantsi: unokuhlalutya isizinda sakho esingummandla kunye nemimandla engezantsi okanye ubakhuphele ngaphandle ukuze bafumane idatha yommandla ophambili kuphela.
Injini yokukhangela : Ezi ziinjini zokukhangela esele zibeke iwebhusayithi yakho okungenani kwigama elinye elingundoqo. Uluhlu luhlelwe ngokuhla ngokulandelelana kwenombolo yamagama aphambili.
Inani lamagama aphambili kwi-TOP: Kweli candelo, uya kufumana itshathi ebonisa inani lamagama aphambili kwi-TOP ngaphambi kwexesha. Kukunceda ukuba ujonge iinguqu kwinani lamagama aphambili uluhlu lwewebhu kwiGoogle TOP 1-100 kwiziphumo zophando lwakho.
Ukuhanjiswa kwamagama aphambili yi-TOP: Apha, unokufumana inani lamagama aphambili uluhlu lwewebhusayithi kwiGoogle TOP -1-100 iziphumo zokukhangela eziphilayo, ngokuchasene nomhla wangaphambili.
Isikhundla ngamagama aphambili: nantsi itafile ebonisa awona magama aphambili abonwa ziiwebhusayithi zamakhasi iziphumo zokukhangela zikaGoogle. Ungafumana isikhundla sabo se-SERP semihla ekhethiweyo kunye nendlela abaye batshintsha ngayo, ngokuchasene nexesha elidlulileyo.
Unethuba lokucoca idatha esetafileni ngeendlela ezahlukeneyo:
Igama eliphambili okanye inxenye yayo
I-URL okanye inxenye yayo
Umzekelo, unokucoca onke amaphepha anezikhundla zegama eliphambili eliqukethe igama elithi '' thenga '' kwaye ube nendawo ka-TOP-1 kwiziphumo zokukhangela.
Le tafile ikubonisa:
Amagama aphambili akwindawo yewebhu kwiziphumo zophando lwakho lukaGoogle
I-URL yamaphepha abekwe kwiwebhusayithi yakho kunye nezikhundla zazo ze-SERP zegama eliphambili.
Ubume bephepha lewebhu kwiGoogle TOP yegama elingunqwenelekayo ngomhla omiselweyo.
Inani eliphakathi lokukhangela kwegama elingundoqo kwiinjini zokukhangela zikaGoogle.
Kweli candelo, uya kufumana amaphepha aqhuba esona sabelo siphakamileyo sezinto eziphilayo kwiwebhusayithi yakho. Nikela ingqalelo ngononophelo kubo: lungisa iimpazamo zabo ezikwiphepha le-SEO, ukongeza umxholo owahlukileyo, kwaye ukhuthaze la maphepha ukuba afumane i-organic traffic ukusuka kukhangelo lukaGoogle. Ngaphakathi koku, iziphumo ziya kukubonisa:
Amaphepha amahle ngokuhamba kwexesha: uya kufumana itshathi ebonisa utshintsho kwinani lamaphepha ewebhusayithi kwiGoogle TOP kuwo wonke umjikelo wobomi beprojekthi. Emva koko ngokutshintsha esikalini, unokujonga idatha kwiveki okanye inyanga.
Umahluko: apha, unokufumana inani lamaphepha ewebhusayithi kwiGoogle TOP 1-100 iziphumo zokukhangela, ngokuchaseneyo nomhla wangaphambili.
Amaphepha akhethiweyo abalulekileyo kumaphepha: apha, itshathi ibonisa utshintsho kwinani lamagama aphambili amaphepha akhethwe kwiGoogle TOP kuwo wonke umjikelo wobomi beprojekthi.
Kweli candelo, uya kufumana zonke iiwebhusayithi ezikwiGoogle TOP 1-100 yamagama aphambili afanayo neliwebhusayithi yakho. Fumana ukuba yeyiphi indawo iwebhusayithi yakho ebambe phakathi kwabakhuphisana nawe ngenani lawo onke amagama aphambili kwi-TOP-100
Funda ukuba uGoogle uphatha iphepha lakho lewebhu njengomthombo owahlukileyo okanye hayi. Apha uzokwazi ukukhangela ipesenti echanekileyo yomxholo owahlukileyo, fumanisa ukuba zeziphi iinxalenye zesicatshulwa ezibhaliweyo, kwaye ujonge kwimithombo ephambili.
Ukujonga iphepha elilodwa
Khangela ukuba ingaba iGoogle iyayiphatha iphepha lakho lewebhu njengelodwa okanye alikho. Nokuba uqinisekile ukuba umxholo wakho wahlukile, kusenokwenzeka ukuba ukope omnye umntu. Kwaye ukuba elinye iphepha lewebhu elinomxholo wakho libhalwe phantsi kungekudala kunelakho, iGoogle iyakuthatha njengomthombo ophambili womxholo, ngelixa iphepha lakho lewebhu liza kufakwa ilebheli libhalwe phantsi. Khumbula ukuba ipesenteji enkulu yephepha lewebhu eliphindiweyo linokukhokelela kwizohlwayo zikaGoogle.
Eyona njongo iphambili yokujonga iphepha
Eyona njongo iphambili yenkonzo yokutshekisha ubumbeko lephepha kukufumana umxholo obiwe ngabaxhasi, onokuya kuwo, indawo yakho iya kuba yinto ephindwe kabini kwaye ungaze uthathe isikhundla esiphezulu.
Ukuqinisekiswa kwenzeka ngamanqanaba amancinci amathathu. Kuqala, ubonakalisa idilesi yendawo, kwicandelo le-URL, emva koko ubonise ukuba uyafuna na ukwenza uqinisekiso lwakho kwilizwe jikelele (google.com (Zonke) -amanye amazwe) okanye kwiwebhu yaseFrance kuphela (google.fr (isiFrentshi) - EFrance), kwaye ngoku uvelisa isiqinisekiso ngokucinezela iqhosha CHECK eluhlaza. Siza kuyiskena sibonisa onke amacandelo.
Emva koko, unokujonga naliphi na icandelo ngokuchofoza okukodwa!
Injini yokukhangela inokuba ithatha indawo ekhethekileyo kweli phepha. Izikhundla zewebhu zingakhula zingangqinelani kwi-SERP.
Injini yokukhangela inokuba ithathela ingqalelo umxholo okwiphepha Izikhundla zewebhu zingakhula okanye, ubuncinci, aziyi kuthoba. Ukukhuthaza iphepha lakho lewebhu, yenza okungakumbi kwaye kuluncedo kumxholo.
Injini yokukhangela inokuba ithathela ingqalelo umxholo okwiphepha Ukukhula kwesikhundla akunakulindeleka. Kuya kufuneka ukhethe umxholo wakho wangoku ngokwahlukileyo.
Emva kwawo onke la malungu, ungabona kwakhona kwisiphumo sakho iinxalenye ezimbini eziphambili, zezi:
Umxholo: Apha, unokufumana wonke umxholo wokubhaliweyo obonwa nguGooglebot kwiphepha lewebhu elinikiweyo. Amacandelo aphindwe kabini omxholo ayabonakala.
Umthombo woqobo: Apha, iiwebhusayithi ezenziwa nguGoogle njengemithombo eyintloko yomxholo onikiweyo zidweliswe kule thebhile. Emva koko, unokujonga ukuba yeyiphi indawo yomxholo efumaneka nganye kwezi webhusayithi.
Qaphela ukuba ungadibana neqela likaSemalt ngayo nayiphi na imibuzo malunga nesisombululo sobunye bewebhusayithi yakho.
Phatha iiwebhusayithi ezininzi usebenzisa isikhombimsebenzisi esisebenzayo. Ngenisa imimandla yakho okanye ii-URL ezithile kuGoogle kwaye ulandelele umsebenzi wazo ngokulula. Qiniseka ukuba uyila iakhawunti kaGoogle ukuze ufikelele kwicandelo leGoogle Webmasters.
Umphathi wewebhusayithi weGoogle yinkonzo ebonisa indlela iwebhusayithi yakho ivela ngayo kwiziphumo zokukhangela zikaGoogle kwaye ikuncede ekuchongeni imiba yokubonisa. Kweli phepha lewebhu, ungangenisa iiwebhusayithi zakho kunye neesayithi njengoluhlu olupheleleyo kwaye ucele uhlengahlengiso lwabo ngoGoogle.
Ipropathi iqulethe: Hluza iziphumo nge-URL okanye ngenxalenye yayo. Ungafumana ii-URLs eziqulathe okanye ezingenalo igama elithile kunye nokufana kwe-URL.
Ezi meyile zibonisa ukuba isebenza kangakanani iwebhusayithi yakho. Ungabajonga ixesha elithile / ixesha elithile kwaye uthelekise idatha. Le nkonzo inceda ekuboneni amandla ewebhusayithi yakho kunye neempazamo eziyithintelayo ukuba zingabekwa kwinqanaba le-TOP 1
Kule bhloko, ungangenisa ii-sitemaps zewebhusayithi yakho kuGoogle ukuze ubone ukuba zeziphi ii-sitemaps ezixeliweyo kwaye zeziphi iimpazamo. Khetha i-domain yokujonga uluhlu lweesemepu.
Jonga ukuba umthwalo wephepha lakho uyahlangabezana neemfuno zikaGoogle. Apha uya kunikwa ulwazi malunga neempazamo ezikhoyo ekufuneka zilungisiwe kunye neengcebiso zendlela yokuphucula ukusebenza kwendawo yakho.
Kutheni isantya sesiza sibalulekile?
Isantya apho imithwalo yewebhusayithi ilayisha khona. Ixesha elide lokulayisha lichaphazela kakubi imeko kwiziphumo. I-Yandex kunye neGoogle zikhetha izibonelelo ezikhawulezayo.
Elona xesha lililo lokulayisha yimizuzwana emi-2-3. Eyona nto ilungileyo-ixesha lokuphendula lomsebenzisi yimizuzwana eyi-0.5.
Namhlanje, uninzi lwabaphulaphuli abakwi-Intanethi basebenzisa izixhobo zeselfowuni ukutyelela iisayithi. Kwaye banendlela yokufikelela ecothayo kunye nezixhobo zangaphakathi kuneekhompyuter ezizezakho.
Wonke umntu uyazi ukuba indawo ecothayo imbi. Ukuba isiza sihamba kancinci ngamanye amaxesha, abatyeleli baneengxaki ezinkulu ekusombululeni imisebenzi yabo, kwaye ngaphezulu koko kuyacaphukisa.
Kodwa nokuba imeko enobutyebi bewebhu iqhelekile, ukulibaziseka okuncinci ekuboniseni indawo kuphumela ekuphulukaneni nababukeli kunye nokuhla kwenqanaba lokuguqula.
Iingcali zeivenkile ezikwi-intanethi zifumanise ukuba xa isantya sokukhuphela sehla nge-100 ms, ukuthengisa kwabo kwehla kwangoko nge-1%.
Ke ngoko, ingxaki yokukhawulezisa isiza kufuneka iconjululwe ngokukhawuleza kwiikhombisi ezininzi.
Kwaye ngesizathu esihle, uSemalt uphuhlise esi sixhobo sokuhlalutya isantya sephepha ukuze ahlaziye zonke iiparamitha ngokubhekisele kwisantya sendawo kunye namaphepha athile: Fumana ukuba isebenza njani.
Ukuhlaziywa kwesantya sephepha
Ukuhlaziywa kwesantya sephepha kusetyenziselwa ukumisela ukuba ingaba ixesha elininzi lephepha lakho lewebhu liyazifezekisa iimfuno zeenjini zokukhangela zikaGoogle. Ikwachaza iimpazamo ekufuneka zilungisiwe kwaye iza nokuphuculwa okunokwenziwa ukukhulisa ixesha lakho lephepha lewebhu.
Emva kohlalutyo, awufumani ngxelo yengxelo yekhompyuter kuphela, kodwa kunye nenguqulo yeselfowuni.
Kwisiphumo ngasinye, uya kubona:
Ixesha lomthwalo wephepha : ixesha elithathayo ukuze iphepha lisebenze ngokupheleleyo.
Uphicotho oluyimpumelelo: Inani lohlolo-zincwadi olwenziweyo iphepha lakho lewebhu liphumelele.
Iimpazamo ukulungisa: Ukulungisa ezi mpazamo kuya kunceda iphepha lakho lewebhu ngokukhawuleza
NgoSemalt, unokucela kwakhona ukubonisana ngokukhululekileyo kwaye ufumane indlela yokuphucula iwebhusayithi yakho: